လိင်တံအရေပြား ဖြတ်သင့်မဖြတ်သင့် | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် လိင်တံအရေပြား ဖြတ်သင့်မဖြတ်သင့်
ယနေ့ခေတ်မှာ ကျန်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ လူငယ်တွေများလာတာနဲ့အမျှ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုလည်း သိလိုစိတ်များလာကြပါတယ်။ ၎င်းတို့ထဲကမှ အချို့သောကိစ္စရပ်များက သိသလိုလို မသိသလိုလို ဇဝေဗဝါဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိလိုရာမေးက အမျိုးသားတွေ အသိချင်ဆုံးလို့ယူဆတဲ့ လိင်တံအရေပြားဖြတ်သင့် မဖြတ်သင့်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဖြေဆိုပေးသွားပါမယ်။
မေး – လိင်တံအရေပြားဖြတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ?
ဖြေ – လိင်တံအရေပြားဖြတ်ခြင်းဆိုတာ လိင်တံထိပ်မှာငုံနေတဲ့ အရေပြားကို ဖြတ်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါဖြတ်ပြီး ပြန်လိုချင်လို့မရတော့တဲ့ အရာမျိုးလည်းဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးအရ သားယောင်္ကျားလေးမွေးပြီးမကြာခင် ထိုကလေးကို အရေပြားလှီးပေးခြင်းရှိသလို၊ အသက်ကြီးမှ ကျန်းမာရေးအရဖြတ်ထုတ်ခြင်းမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ငယ်တဲ့အချိန်အရေပြားဖြတ်ရင် အချိန်သိပ်မပေးရပေမယ့် အသက်ကြီးမှဖြတ်တယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းနဲ့အများ အချိန်ပေးရပါတယ်။ ပြီးနောက် အနာကျက်စေဖို့ (၇)ရက်လောက်စောင့်ရမှာဖြစ်ပြီး အဲ့အချိန်အတွင်းမှာ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရပါဘူး။ တတ်နိုင်သမျှ အညှော်ရှောင်၍ အတွင်းခံဝတ်တဲ့အခါ၊ ရေချိုးတဲ့အခါမှာ မကျက်သေးတဲ့အနာကို မထိခိုက်အောင် ဂရုစိုက်နေထိုင်သင့်ပါတယ်။
မေး – လိင်တံကြီးထွားမှုဖြစ်စေလား?
လိင်တံအရေပြားဖြတ်ခြင်းကြောင့် လိင်တံထိပ်ဖူး ပိုမိုပေါ်လွင်သွားစေလို့ ယခင်ထက် ကြီးသွားတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ ပုံမှန်အရွယ်အစားအတိုင်းပါပဲ။ လိင်တံအရွယ်အစားကြီးတယ် သေးတယ်ဆိုတာက အရေပြားဖြတ်ခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲ ကိုယ်တွင်းသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းခြင်း၊ မျိုးရိုးဗီဇနှင့် အစားအသောက်ပေါ်သာမူတည်ပါတယ်။
မေး – လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေလား?
လိင်တံအရေပြားက လိင်တံထပ်ဖူးကို ဖုံးအုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် လိင်တံထိပ်ဖူးက နူးညံမှုပိုရှိပြီး ကာမစိတ်လှုံ့ဆော်မှု ပိုမြန်ပါတယ်။ ၎င်းအရေပြားက လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ပွတ်တိုက်မှုများတဲ့အတွက် လိင်တံပွန်းပဲ့နိုင်ခြေလည်း ပိုများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရေပြားဖြတ်ပြီးတဲ့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ လိင်တံထိပ်ဖူးအာရုံခံစားမှု အနည်းငယ် လျော့နည်းလာပြီး လိင်ကိစ္စပြီးမြန်ခြင်းကို နှောင့်နှေးလာစေတယ် ဆိုပေမယ့် ၎င်းအချက်နှစ်ချက်ကို ယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ လိင်ကိစ္စပြီးမြန်ခြင်း၊ မမြန်ခြင်းဆိုတာ မိမိစိတ်ခံစားမှုနဲ့သာ သက်ဆိုင်ပြီး အရမ်းကြီးကွာဟတဲ့ကွဲပြားမှုရယ်လို့ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။
မေး – သဘာဝချောဆီထွက်မှု ကွာခြားခြင်းရှိပါသလား?
ရှိပါတယ်။ လိင်တံအရေပြားရှိခြင်းက လိင်တံအရေပြားဖြတ်ထားခြင်းထက် သဘာဝချောဆီထုတ်လုပ်ပေးတာ ပိုများပါတယ်။ လိင်တံအရေပြားဖြတ်ထားတဲ့အခါ သဘာဝချောဆီထုတ်လုပ်မှုအားနည်းတဲ့ အတွက် စအိုကိုလိင်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် အနည်းငယ်အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ယင်းကဲ့သို့အခြေအနေမျိုးကို အခြားချောဆီများသုံး၍ ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့အတွက် သဘာဝချောဆီနည်းခြင်း၊ များခြင်းက ကာမဆက်ဆံခြင်းအပေါ် ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါဘူး။
မေး – မျိုးအောင်နိုင်ခြင်းနဲ့ သုက်ကောင်ထုတ်လုပ်မှုအားပိုကောင်းလာနိုင်လား?
လိင်တံအရေပြားဖြတ်ခြင်း၊ မဖြတ်ခြင်းက သုက်ကောင်ရေ တိုးပွားခြင်းနဲ့ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တာမဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့ နေထိုင်စားသောက်ခြင်းကသာ ၎င်းအရာကို အထောက်အကူပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တံအရေပြားဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ လိင်တံထိပ်ဖူးရောင်ခြင်း၊ ဘောင်းဘီဇစ်ဆွဲရင် လိင်တံထိခိုက်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပြီး လိင်တံအရေပြားမဖြတ်ထားတဲ့လူအဖို့ လိင်တံသန့်ရှင်းရေးနဲ့ ဘက်တီးရီးယားမဝင်ဖို့ ပိုဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
မေး – လိင်တံကင်ဆာဖြစ်ခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကာကွယ်ပေးနိုင်လား?
လိင်တံအရေပြားဖြတ်ထားခြင်းက လိင်တံသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူပြီး ဘက်တီးရီးယားခိုအောင်းနိုင်ခြင်း နည်းပါးတဲ့အတွက် ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါ ဝင်ရောက်နိုင်မှုနည်းခြင်းနဲ့ လိင်တံကင်ဆာဖြစ်ခြင်း ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးပါတယ်။ လိင်တံအရေပြားရှိနေခြင်းက အဆိုပါရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့အတွက် မိမိရော မိမိအဖော်ပါကျန်းမာစေဖို့ လိင်တံသန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် လိင်တံအရေပြားဖြတ်ခြင်း၊ မဖြတ်ခြင်းက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေပါဘူး။ ဘာသာရေးအရ အရေပြားဖြတ်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာရေးအတွက်အရေပြားဖြတ်ခြင်းက မိမိခံယူချက်နဲ့သာ သက်ဆိုင်ပြီး လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ သတိထားရမယ့်တစ်ချက်က လိင်တံအရေပြားဖြတ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ မဖြတ်သည်ဖြစ်စေ ကွန်ဒုံးသုံးကိုသုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဘေးကင်းတဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းမျိုးဖြစ်ကာ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဝေမျှတာဖြစ်ပါတယ်